ကလေးကိုဆက်ပြီးကျွေးမွေးနေရှာတဲ့ ဝမ်းနည်းဖွယ်တစ္ဆေတစ်ဦးရဲ့ မိခင်မေတ္တာ !! - JAPO Japanese News
သော 27 Nov 2020, 16:10 ညနေ
ကလေးတွေအတွက်အမေ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာအရမ်းကိုကြီးမားလွန်းပါတယ်။အားလုံးပဲသိကြတဲ့အတိုင်း ထိုချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ သေပြီးနောက်ပိုင်းမှာပင် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။
ဂျပန်ရဲ့ ကျော်ကြားသောသရဲပုံပြင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကလေးပြုစုပျိုးထောင်သည့်သရဲပုံပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ဒီတစ်ခေါက်မှာ ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဒီဝိညာဉ်ပုံပြင်ကိုကြည့်လိုက်ပါဦးနော်။
တစ်ခါတုန်းက ညသန်းခေါင်ယံအချိန် . . . လူတိုင်းအိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါမှာပေါ့
ချိုတဲ့မုန့်တွေ အနည်းငယ်မျှသာရှိတဲ့ခေတ်တုန်းကဖြစ်လို့ သကြားလုံးဟာ အလွန်အဟာရဓာတ်ဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကတံခါးဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့
ပြားနှမ်းနေတဲ့မျက်နှာရှိတဲ့ ဆံပင်ရှည်ရှည်နဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရပ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။
“ သကြားလုံးရောင်းပါ” .. ..ယိုယွဲနေပုံရတဲ့အသားအရေ၊ အားနည်းသောအသံနှင့် ပြောပါတယ်။
ဆိုင်ပိုင်ရှင်က နည်းနည်းစိတ်မသန့်သလိုခံစားရပြီး သကြားလုံးရောင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ “ နင်ဘယ်ကလာတာလဲ?” လို့မေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီအမျိုးသမီးကဘာမှပြန်မပြောဘဲ ညအမှောင်ထုထဲမှာပဲပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်ကတော့ ဒီအမျိုးသမီး နေမကောင်းလို့ အချိုအဟာရရှိဖို့ သကြားလုံးလာဝယ်တာနေမှာပဲလို့ တွေးခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့ ည အလားတူပင် ညဥ့်နက်ချိန်မှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသကြားလုံးလာ၀ယ်ပါတယ်။
အရင်နေ့ကလာတဲ့အမျိုးသမီးပါပဲ။အရင်နေ့ကလိုပဲ သကြားလုံးဝယ်ပြီး မှောင်မိုက်တဲ့ညထဲမှာထပ်မံပျောက်ကွယ်သွားပြန်ပါတယ်။ဒီလိုအဖြစ်အပျက်က နေ့တိုင်းဆက်တိုက်ကိုဖြစ်နေခဲ့တယ်။
ငါပိုက်ဆံမရှိတော့လို့ .. .. ဒီဟာ နဲ့ သကြားလုံးကိုရောင်းလို့ရမလား?
သူမကသူမရဲ့ haori ဂျပန်အပေါ်ဝတ်ကုတ်ကို ပေးကာရောင်းရန်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သနားစရာကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် ပိုင်ရှင်ကလည်း သကြားလုံးကိုရောင်းလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ စတိုးဆိုင်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာ Haori ကိုခြောက်သွေ့အောင်လှန်းထားလိုက်ပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့မှာတော့ စတိုးဆိုင်ရှေ့တွင်နေလှန်းထားတဲ့ Haori ကိုတွေ့သွားတဲ့ အလွန်ဝေးလံသောနေရာမှ အမျိုးသားတစ်ယောက်က အံ့အားသင့်သွားပြီး ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုလှမ်းအော်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီအဝတ်က ကျွန်တော့်ရဲ့ သေသွားပြီဖြစ်တဲ့ သမီးရဲ့ အဝတ်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် ခေါင်းတလားထဲထည့်လိုက်တာဖြစ်ပေမယ့် . . .
သကြားလုံးဆိုင်ပိုင်ရှင်လည်း ဒီအကြောင်းကိုကြားသိရတဲ့အခါ အဲဒီအမျိုးသားနဲ့ သင်္ချိုင်းသို့အပြေးသွားကြပြီး ဟိုရောက်တော့ သင်္ချိုင်းတွင်းမှကလေးငယ်ရဲ့အသံကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ ပြန်ပြီး အခေါင်းကို တူးပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ မွေးခါစကလေးငယ်ကိုဖက်ထားပြီး သကြားလုံးပေးနေတဲ့ သမီးရဲ့အလောင်းကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အချိန်မှာ သေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီအချိန်မှာဒီတိုင်းမြေမြှပ်ခဲ့လို့ ဒီအတိုင်းမွေးဖွားသွားလေသလား ?
ဆေးပညာနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေတကယ်ရှိသလားဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်မသိပါဘူး။
ဒါပေမယ့်သူမဟာ ကိုယ်တိုင်က သေသွားတာတောင် ကလေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ချင်တဲ့ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်။
စကားမစပ်၊ ဒီကလေးက ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ သူဟာ ဘုရားကျောင်းမှာကြီးပြင်းလာပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဘုန်းတော်ကြီးဖြစ်လာတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းကဖြစ်ရပ်မှန်လား . . .?
Minatoya Ghost ကလေးမွေးဖွားခြင်း Candy Honpo (Minatoya Yurei Kodate Am Honpo)
နှစ်ပေါင်း ၄၅၀ ကျော်သမိုင်းရှိခဲ့သည့် ဤသကြားလုံးဆိုင်သည် အမှန်တကယ်ကိုပဲ တစ္ဆေ ကို သကြားလုံးရောင်းချခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ယခင်ကရော ယခုရော ရောင်းနေရဆဲဖြစ်သော 子育て飴သကြားလုံးအမည်ရှိတဲ့ ထုတ်ကုန်က အလွန်လှပတဲ့အရောင်ရှိပါတယ်။
ထို့အပြင် ကျိုတိုတွင် တစ္ဆေများက ကလေးပြုစုပျိုးထောင်တယ်ဆိုတဲ့ 立本寺（りゅうほんじ）ရူဟွန်ဂျီလို့ခေါ်တဲ့ ဘုရားကျောင်းလည်းတည်ရှိနေပါတယ်။